Warbixin:- Aas-aaska Qaramada Midoobay waxaa laga joogaa 73-sano – XOGMAAL.COM
Ururka Qarammada Midoobay (UN), oo lagu dhisay xeerkii lagu qoray Magaalada Sanfrancisco ee dalka Mareykanka 1945-kii, waxaa horrmuud ka ahaa dalalka Midowgii Soofiyati, Shiinaha, Maraykanka, Faransiiska iyo Boqortooyada Midowday (UK).
Ururka Qarammada Midoobay (UN), waxaa si rasmi ah loo Aasaasay, 24kii, Oktoobar 1945kii, Xilligaasi oo ahaa markii uu dhammaaday dagaalkii weynaa ee dunida kiisii labaad, waxaana horey loo oran jiray Ururka ummadaha ama Leage of Nations, kaasi oo burburay markii lagu guda jiray dagaalkii 2-aad ee dunida, waxaana la aas-aasay ururkaasi 1920-kii, waxaana lagu eedeeynayay inuu awoodi waayay, joojinta dulmigii kaligii Taliyeyaashii lagu kala magacaabi jiray Adolf Hitler iyo Moselini oo ka kala arrimi jiray Jarmalka iyo Talyaaniga, kuwaasi oo hormuudka ka ahaa dagaalkii koowaad 1914 iyo kii labaad dunnida 1939kii.
Ujeeddada Ururka loo dhisay ayaa waxa uu ahaa:-
1.In Caalamka laga suuliyo dagaallada, lana adkeeyo nabadda.
2.In Xididdada loo siibo wax allaale wixii keeni kara iska horimaad iyo dagaal. 3.In la dhiirigeliyo iskaashiga dunnida ee dhinacyada, Dhaqaalaha, Waxbarashada iyo dhaqanka, Cilmiga Sayniska iyo Tiknolojiyada,
4- In la dhowro xaquuqda dadka oo dhan shaqsi ahaan iyo wadar ahaan Qarammada Midoobay, oo ay xubno ka yihiin dhowr Dal, oo shan ka mid ah yihiin xubnaha joogtada ah, ahna kuwa leh Codka Diidmada Qayaxan “ Vito Power”.
5- Golaha Xoghaynta,
6- Maxkamadda Caddaalada ee Caalamiga ah.
7- Golaha Dhaqaalaha iyo Bulshada.
Ururka Qarammada Midoobay, howlahiisa waxaa inta badan qabta Golaha Xoghaynta oo uu Madax ka yahay Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobay, waxaana ka howlgala shaqaala tiradoodu gaareyso 50,000. Kuwaasi oo maareeya dhammaan howlaha la xiriira maamulka Ururka Qarammada Midoobay.
Goluhu Xoghayntu, waxay diyaarisaa qoraallada go’aamada ka soo baxa shirka, Qarammada Midoobay iyo tarjumidda wararka iyo khudbadaha,Xoghayaha guud ee Qarammada Midoobay, waxaa soo magacaaba Golaha loo dhan yahay ee Qarammada Midoobay, waana Sargaalka ugu sarreeya dhanka maamulka ee Qarammada Midoobay, wuxuuna xilka hayaa muddo shan sanno ah ka dib marka uu ansixiyo Golaha Ammaanka ee Qarammada Midoobay.
Tan iyo markii la aasaasay ururka Qarammada Midoobay1945-kii, waxaa xilka xoghayaha guud soo kala qabtay 9 Xoghaye Guud oo uu ugu horreeyay Trygvie, oo dhashay dalka Norway oo xilka hayay 1946,ilaa 1952kii, waxaana ugu dambeeyay kan haatan haya xilka oo ah António Manuel de Oliveira Guterres, oo xilka qabtay 1 January 2017-kii, Wuxuu u dhashay dalka Portuqiiska, da’diisuna tahay 67 sano jir.
Ururka Qarammada Midoobay waxyaabaha uu ku guuleystay intuu uu dhisnaa ayaa waxaa laga xusi karaa:-
1-Xornimo gaarsiinta waddamada dunnida oo intooda badani markaasi ku hoos jiray gumeysi.
2-Xal u helidda khilaafyo badan ee dhinacyada xudduudaha ee Caalamka sida Iiraan iyo Midowgii Sofiyatigii hore iyo Ciraaq iyo Kuweyt.
3-X akameynta cudurrada faafa sida Malaariyada iyo TB-da.
4-U qeybinta cuntada gargaarka meelaha dadka ku dhibaateysan yihiin sida, Abaaraha, Dagaallada iyo Masiibooyinka kale.
5-Tirtiridda habkii Midabtakoorka ahaa ee ka jiray Dalka Koonfur Afrika muddo dheer.
6- Dhiirigalinta ilaalinta Xaquuqda Aadanaha, Sinnaanta iyo ku dhaqanka nidaamka doorashada xorta ah.
7- Waxay gargaar dhaqaale iyo mid khibradeed u fidisaa waddamada saboolka ah, gaar ahaan, dhinaca Caafimaadka iyo Waxbarashada.
Ururka Qarammada Midoobay, wuxuu leeyahay hay’ado hoos yimaado oo midba arrimo qaabilsan tahay waxayna kala yihiin:-
1.Hay,adda Cuntada iyo Beeraha ee FAO, oo Xarunteeda tahay Rome ee dalka Talyaaniga.
2.Hay’adda Qaxootiga Adduunka UNHCR, oo xarunteedu tahay Gineva ee dalka Swizerland.
3.Hay’adda Waxbarashada ee UNESCO, oo Xarunteedu tahay magaalada Paris ee dalka Faransiiska.
4.Hay’adda Caafimaadka Adduunka WHO, oo Xarunteedu tahay magaalada Swizerland.
Hay’adda horumarin barnaamijyada UNDP, oo Xarunteedu tahay magaalada New York, ee dalka Mareykanka.
6.Bangiga Adduunka, “World Banka”oo Xaruntiisa magaalada Washington DC, ee dalka Mareykanka.
Haddaba maanta oo ah maalintii la aasaasay Ururka Qaramada midoobay ayaa waxaa dhammaan dunida daafaheeda laga xusayaa maalinatani, oo ay ku jirto Dalka Soomaaliya.
War-saxaafadeed laga soo saaray Xaruunta Qaramada Midoobay ee New york ayaa lagu yiri:- “waxaan xuseynaa maalintii ururkan caalamiga ah si rasmi ah loo yagleelay ee 1945-tii, oo noqday madasha ugu caansan ee lagu gorfeeyo arrimo ka baxsan soohdimaha dalalka ee uusan hal dal si iskiis ah u xallin karin.
War-saxaafadeed kale oo ay soo saareen Hey’adaha Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) iyo tan Sanduuqa Carruurta (UNICEF) ayay ku sheegeen in Maalinta Caalamiga ah ee Cudurka Dabeysha, UNICEF iyo WHO ay qaadanayaan waqti si ay uga mahad naqaan dadaalada waaweyn ee ay ka gaareen howlwadeenada iyo la-hawlgalayaasha cirib tirka cudurka dabeysha gudaha Soomaaliya labaatankii sano ee lasoo dhaafay. Marka la eego tusaalihii ugu dambeeyay, UNICEF, WHO, hay’adaha caafimaadka iyo la-hawlgalayaasha ayaa si hagar la,aan ah uga shaqeynaya si ay u joojiyaan laba cudur dilaac oo isku mar dhacay kaasoo ahaa tallaalka uu keenay cudurka dabeysha ee tallaalka ka yimid kaasoo la xaqiijiyay inuu Soomaaliya ka jiro dabayaaqadii sannadkii 2017-kii.
Inka badan 35 Ruux ayaa wax yeello ka soo gaartay qarax ka dhacay Ciraaq